U-Akita: Inja Eyelusa Kakhulu yaseJapan - Izinhlobo
U-Akita uyinja enkulu evela eJapane. Lezi zinja zinemisipha futhi zingawulandela umlando wazo kude emuva eJapane lasendulo. Bake bahlonishwa njengezimpawu zempilo enhle nenjabulo.
Lezi yizinja zokuqapha, ukudabula. Ngenkathi zisetshenziswa kakhulu njengabangane namuhla, lezi zinja eziqaphile zisathwala imizwa yazo eminingi ziye ezikhathini zanamuhla. Lokhu kungabenza izidalwa eziyinkimbinkimbi.
Ubukeka kanjani u-Akita?
Ngabe ama-Akitas amakhulu kangakanani?
Yimiphi imibala ama-Akitas angangena kuyo?
U-Akita Othembekile Nohloniphekile
Izinkinga Zempilo Yezinja ze-Akita
Yimalini inja ka-Akita?
Ngubani okufanele athole inja ye-Akita?
U-Akita uyinja yasendulo yaseJapan. Ivela eJapane lasendulo futhi iyinja enohlobo lweSpitz. Uhlobo lolo kungenzeka lubuyela emuva emlandweni.
Kodwa-ke, lolu hlobo njengoba silwazi namuhla lwenziwa ekuqaleni kwekhulu le-17 enyakatho yeJapane. Ziningi izinganekwane maqondana nokuthi le nja yaba khona kanjani.
Enye yezinsumansumane ehilela isicukuthwane esasidingisiwe futhi esasithanda izinja. Wathunywa ukuthi ayohlala izinsuku zakhe zonke esiqhingini.
Ukhuthaze abanye esifundeni sase-Akita ukuthi bazale inja yokuzingela enhlobonhlobo yomdlalo omkhulu. Ekugcineni, lokhu kwadala u-Akita, owaziwa ngokuzingela izingulube zasendle, izinyamazane, kanye nebhere.
Isikhathi eside, ukuba ne-Akita bekuvinjelwe imindeni yasebukhosini. Kodwa-ke, ezikhathini zamuva nje, abantu bansuku zonke baqale ukubasebenzisa njengezinja zokuzingela kanye nezinja.
Ezikhathini ezahlukahlukene emlandweni, le nja iye yanyamalala emaphethelweni okuqothulwa. Lokhu ikakhulu kungenxa yokuthi bekuvinjelwe izikhulu ngomlando wayo omningi. Ukuvimbela ukuzalaniswa kohlobo, iklabhu kazwelonke yezwe laseJapan yasungulwa ngo-1927.
UHelen Keller kamuva waletha u-Akita wokuqala e-United States. Wathathwa wayobona umfanekiso kaHachiko phakathi nohambo lwakhe lwaseJapan.
Lo Akita odumile wayaziwa ngeminyaka yokulinda umnikazi wakhe esiteshini sesitimela. Ngemuva kokuvakashela lesi sithombe, wanikezwa ngama-Akita amabili nguhulumeni waseJapan.
Ngemuva kweMpi Yezwe II, amasosha amaningi abuyisa ama-Akitas ezifundazweni. Kodwa-ke, u-Akita akazange angene ku-AKC Stud Book kuze kube ngu-1972.
I-Akita iyi- okukhulu nenja enamandla. Inomzimba onama-burly, onamathambo asindayo futhi iyinja ejwayelekile yohlobo lwe-spitz.
Ikhanda labo likhulu futhi likhulu, okubenza babe namandla kakhulu. Le nja enkulu futhi inomsila omkhulu, ogobile.
Ukudla okumile kwenza ikhanda labo libukeke likhulu kakhulu kunalokho eliyikho ngempela! Amehlo abo akhanyayo angenye yezimpawu zohlobo. Amehlo abo aqaphile futhi ayabonisa.
Kusho ukuthini uma umsila ka-Akita uphansi?
Umsila ka-Akita bese ushaya phansi ngezizathu ezahlukahlukene. Uma inja idumele, ilele, noma isezinhlungwini, umsila ungalahla ngenxa yalokho.
Lokhu kwenzeka kakhulu lapho imidlwane ikhona ukuthambisa amazinyo ngoba ubuhlungu obusemlonyeni wabo bungadala ukuthi umsila wabo wehle ngokungabonakali isizathu.
Umsila wazo nawo ungaconsa lapho ukhona ukuphumula noma nje awusebenzi kakhulu okwamanje. Lokhu kuvamile kuzo zonke izinja ezinemisila ephakanyisiwe.
Njengezinja ezinomsila oqondile ngeke njalo imisila yazo ime iqonde, izinja ezinemisila egobile ngeke zihlale ziphakeme njalo ngemisila yazo.
Noma kunjalo, ama-Akitas nawo angathola okuthile okubizwa nge- umsila ofriziwe . Lokhu kwenzeka lapho ngokuyisisekelo 'bencipha' umsila womsila wabo.
Imvamisa, lapho lokhu kwenzeka, inja ayiyikhulisi isonto noma amabili ngoba ibuhlungu. Isikhathi esiningi, inja izoba ngcono yodwa. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, kungadinga ukwelashwa ngemithi.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zama-Akitas - Ama-Akitas aseJapan futhi Ama-Akitas aseMelika . Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili usayizi. Ama-Akita aseMelika mancane kunama-Akitas aseJapan.
Ama-Akita aseJapan nawo anezindlebe ezincane. Ama-Akita aseMelika anezindlebe ezinkulu impela.
Imvamisa, ama-Akitas angama noma yikuphi ukusuka kuma-intshi angama-24 kuye kwangama-28, cishe ama-61 cm kuye kuma-71 cm. Bangakwazi futhi ukukala noma yikuphi ukusuka kumakhilogremu angama-70 kuye kwayi-130 noma cishe ama-31.7 kg kuye kuma-59 kg.
Abesilisa bavame ukuba bakhulu kakhulu kunabesifazane. Ngempela ngeke uthole insikazi engaphezu kwamakhilogremu ayi-100 noma ama-45 kg. Kodwa-ke, abesilisa bangathola ubukhulu obungamakhilogremu ayi-130 noma ama-59 kg.
Ama-Akitas angafika ngemibala embalwa ehlukene, kufaka phakathi umhlophe. I-red fawn ingenye yemibala yengubo ethandwa kakhulu.
Kodwa-ke, i-sesame, emnyama, ushokoledi, ne-brindle nakho konke kungenzeka. Ukumakwa okumhlophe kuvame kakhulu.
Okunye ukumaka kuvamile futhi. Amamaski amhlophe, ama-pinto, namnyama kungenzeka.
I-Akita inengubo ephindwe kabili, eyenza ibe yinhle ukumelana nesimo sezulu (futhi iyanetha).
Ama-Akitas akhuliswa ukuze asebenze ngezindlela eziningi ukuzingela izinja. Iningi lezimo zabo zasendulo nezici zobuntu babo zisakhombisa nanamuhla.
Ingabe ama-Akitas ayizinja ezinhle zomndeni?
Hhayi ikakhulukazi. Bangamalungu aqotho futhi anothando emindenini eminingi. Bayakuthanda ukuba nemindeni yabo futhi kungavikela kancane.
Noma kunjalo, abathandi kakhulu abantu abangabazi. Usayizi wabo omkhulu ungenza kube nzima ukulawula futhi.
Bazoqubuzana namalungu omndeni, kepha cha ngokweqile cuddly. Abazona izigqila zomuntu ophambukayo.
Ama-Akitas angalunga nezingane, kepha ahamba phambili ngezingane ezindala. Ababekezeleli ikakhulukazi izingane ezincane.
Ngabe ama-Akita angahlala nezinye izinja?
Cha. Baziwa kakhulu ngokuba kwabo nolaka maqondana nezinye izinja, ikakhulukazi lezo zobulili obufanayo. Ukuxhumana nabantu njalo kubonakala kungakusizi lokhu. Le nja ingeyasekhaya esisodwa nje.
Ngabe ama-Akitas athola ukukhathazeka ngokwehlukana?
Ama-Akitas awajwayelene nokukhathazeka ngokwehlukana. Kodwa-ke, noma yiluphi uhlobo lungathola ukukhathazeka ngokwehlukana, ngakho-ke kungenzeka impela.
Ukukhathazeka ngokwehlukana kungadala izinkinga ezahlukahlukene zokuziphatha. Ngoba lezi zinja zikhulu kakhulu, zingenza umonakalo omkhulu.
Noma kunjalo, lezi zinja ngokuvamile ungenzi ube nokukhathazeka ngokwehlukana.
Kungani ama-Akitas enolaka kangaka?
Ama-Akitas awazange akhuliswe ngokomlando ukuba azungeze ezinye izinja eziningi. Azihloselwe ukupakisha futhi zingaba indawo.
Lesi yisona sizathu esiyinhloko sokuba nolaka. Benza kahle kakhulu emakhaya enenja eyodwa noma emakhaya akhululeke ngokuphelele kwezinye izilwane ezifuywayo.
Yize kunamahemuhemu athile, ama-Akitas abesifazane nawo anolaka.
Bobabili ubulili bangenza ababheki abahle ngenxa yalesi sici.
Ngabe ama-Akitas akhonkotha kakhulu?
Azinomsindo ikakhulukazi, kepha ziyakhonkotha. Njengezinja zendawo, zizokhonkotha izivakashi, abantu abahamba ngaphandle, nezinja ezingaziwa. Bangakwazi ukwenza onogada abahle nezinja eziqaphile ngenxa yalokhu.
Kodwa-ke, uma ufuna inja ethule, lokhu akuyona.
Ungakwazi ukuqeqesha u-Akita?
Njengazo zonke izinja, ama-Akita anjalo okuqeqeshwayo . Banobuhlakani futhi bathembekile, okusisebenzelayo lapho sizama ukubaqeqesha.
Kodwa-ke, bangaba nenkani futhi bazimele. Lokhu kuvame ukujwayeleka kakhulu esigabeni sabo “sobusha”.
Ukuqeqeshwa kusenesikhathi futhi kaningi kubalulekile. Ngaphandle kwalokho, lezi zinja kalula zingalawuleki. Kufanele bahlanganyele kakhulu njengezinja ezincane.
Amakilasi ama-puppy ayadingeka kulawa ma-canine. Badinga ukufunda ukwamukela izinhlobo ezahlukahlukene zabantu abangabazi. Okuzenzakalelayo ukuthi bonke abantu ongabazi bayizinsongo; ukuxhumana nomphakathi kusenesikhathi kudinga ukulungisa le nkolelo.
Lezi zinja zikhona kakhulu kuhlanzekile. Lokhu kwenza kube lula kakhulu esitimeleni esinamanzi. Eqinisweni, ezinye izinja zivame ukuziqeqesha ngobumba ngaphandle komzamo omncane kithi!
Ama-Akitas awanzima kangako ukuwanakekela. Eqinisweni, izidingo zabo zokunakekelwa zincane. Azizweli kakhulu sezulu nesimo sezulu, okwenza kube ukukhetha okuhle ezifundeni eziningi.
U-Akita udinga ukuzivocavoca okungakanani?
U-Akita udinga ukuzivocavoca umzimba kancane ngenxa yamandla abo aphezulu. Akuzona izinhlobo ezisebenza ngokweqile.
Kodwa-ke, badinga inani elilinganisiwe lokuzivocavoca nsuku zonke. Ukuhamba ngokushesha kuyindlela enhle, noma lolu hlobo lwaseJapan lungadinga okungaphezulu kwalokhu.
Ngokuzivocavoca nsuku zonke, lezi zinja zingenza kahle ekhaya elincane. Bahlaliswe kakhulu ngaphakathi futhi baziphethe kahle. Kungaleso sikhathi lapho bevivinya umzimba okuncane kakhulu lapho bangaba yingozi khona.
Ngisho nesikhathi sokudlala esincane ngaphandle kwegceke kungaba yindlela efanelekile yalawa ma-canine.
I-Akita ehlanzekile kakhulu
Lezi zinja zaziwa ngokuzihlanza njengamakati. Zihlanzekile kakhulu futhi azidingi ukuzilungisa okuningi kuwe ngenxa yalokhu.
Banephunga elincane le-doggy futhi abadingi ukugeza kaningi. Ijazi labo elijulile lidinga ukuxubha nsuku zonke.
Uhlobo lwe-Akita luchitha ngezikhathi ezithile zonyaka. Ngalezi zikhathi, bazodinga ukubhuliswa ngaphezulu. Lapho zingachitheki, ungahle ubalekele ukuzixubha kanye ngesonto.
Kuxhomeke kumuntu ngamunye nesikhathi sonyaka. Udinga ukuthi ubheke ezingeni labo lokuchitha ukuze unqume ukuthi kufanele uwahlambe nini.
Ingubo yabo yangaphansi yilapho izinwele zabo eziningi ezikhishwe zivela khona, ngakho-ke kuzodingeka usebenzise ibhulashi elifanele ukufinyelela ekujuleni kwengubo yabo. Ijazi labo langaphandle lingakhipha futhi, kepha imvamisa alibi kubi kangako.
Njengazo zonke izinja, uzodinga ukuxubha amazinyo abo futhi usike izinzipho zabo njalo. Lokhu kubaluleke kakhulu empilweni yabo. Izipikili ezikhule kakhulu zingaba buhlungu, futhi amazinyo anegciwane angadala izinkinga ezisongela impilo.
U-Akita udla malini?
Ama-Akitas angadla kakhulu. Kunjalo okukhulu izinja, ngakho-ke zidinga ukudla okuningi okwengeziwe ukuze zichume. Umuntu omdala ojwayelekile udla cishe izinkomishi ezi-5-6 zokudla ngosuku.
Noma kunjalo, ukudla okwehlukile kunamanani e-caloric ahlukile. Njengoba ungacabanga, lokhu kungathinta inani olidingayo ukondla i-canine yakho. Hlola ngemuva kwesikhwama sakho sokudla kwenja noma ikani ukuthola imiyalo ethile.
Lezi zinja zidinga ukudla okunamaprotheni amaningi ngenxa yomzimba wazo wemisipha. Badinga amaprotheni amaningi ukugcina ukwakha kwabo kwezemidlalo.
Ukudla okuningi kwezinja ezisezingeni eliphakeme kuqukethe inyama eningi, okusho ukuthi imvamisa iphakeme kakhulu ngamaprotheni. Lokhu kuzobiza kakhulu, kepha kubalulekile enhlalakahleni yabo iyonke.
Njengezinhlobo eziningi, lezi zinja zijwayele ukuba nezinkinga ezimbalwa zezempilo. Okokuqala, bangaba nezinkinga zamehlo, njenge ukuqhubeka kwe-atrophy ye-retina noma i-PRA.
Lesi sifo ngokuyisisekelo sibandakanya ukumoshwa kwamaseli enja yakho, okusiza ukuthi ubone i-canine. Ngaphandle kwazo ukusebenza kahle, inja izogcina ingaboni. Lesi yisimo sezakhi zofuzo.
Izinkinga zezindlebe nazo zingenzeka, yize zingajwayelekile njengamanye ama-canine. Uma nje unake izindlebe zenja yakho futhi uzihlanze lapho zingcola, ithuba lokutheleleka ezindlebeni kufanele lehliswe.
Ngoba lezi zinja zinkulu, izinkinga ezihlanganayo zivamile. Lokhu kuyiqiniso cishe kuzo zonke izinja, kepha futhi kunokuningi okuphathelene nakho izakhi zofuzo . I-hip dysplasia ivamile.
Ngenhlanhla, kunezinto ezimbalwa ongazenza ukugwema lezi izinkinga ezihlangene . Okokuqala, ukuzivocavoca okukhulu ngenkathi inja ikhula kungadala izinkinga ngokuhlanganyela ngokuhamba kwesikhathi.
Izinja ezingakaqedi ukukhula akumele zisetshenziswe kakhulu, futhi akufanele neze ukuphoqelelwa ukuzivocavoca umzimba. Uma umdlwane udinga ukubeka phansi uthathe ikhefu ngesikhathi sokuhamba, kufanele ubayeke bathathe ikhefu.
Kufanele futhi uqinisekise ukuthi wondla umdlwane ukudla okulungile komdlwane. Akukhona konke ukudla komdlwane okufanele lezi zinja.
Udinga ukudla okwenzelwe imidlwane emikhulu yokuzala. Lokhu kuqukethe izakhi umdlwane okhulayo udinga ukuxhasa amalunga alo.
I-Akita nayo ithambekele kancane ukuqumba . Akekho owazi kahle ukuthi yini ebangela lesi sifo.
Kodwa-ke, kusongela impilo futhi kubonakala kuvame kakhulu ezinhlotsheni ezithile zezinja ngesizathu esingaziwa. Kubandakanya isisu ukugcwalisa igesi.
Ekugcineni, isisu sizodudula imithambo, sinqamule ukusakazeka kwezitho ezithile nemisipha ethile. Lokhu kungabulala ngokushesha okukhulu futhi kudinga ukuhlinzwa okuphuthumayo.
I-Hypothyroidism kujwayelekile futhi. Ukungajwayelekile emgodini wegilo kubonisa lesi sifo. Lokhu kuholela ekwehliseni ikhono lezinja lokusebenzisa umzimba, elingadida nazo zonke izinhlobo zezinto.
Izimpawu zalesi sifo zibandakanya ukuzuza kwesisindo, ukukhathala, ukungabekezelelani okubandayo, izinwele ezifiphele, ijazi elincanyana, nokwanda kombala kwesikhumba.
Lesi sifo hhayi iyelapheka, kepha iyalawuleka ngemithi. Inja yakho izodinga ukuthatha i-hormone yomlomo esikhundleni se-thyroid.
Yikuphi ukuhlolwa kwezempilo okufanele u-Akita abe nakho?
Ngaphambi kokudalwa, abazali abangahle babe ama-Akita kufanele bahlolwe impilo. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi abadlulisi noma yiziphi izinkinga ezingaba khona ezinganeni zabo.
Amehlo abo kufanele ahlolwe, futhi amalunga abo kufanele afakwe i-x-ray ukuqinisekisa ukuthi abathambekele ethembeni le-dysplasia.
Kufanele ubuze mayelana nokuhlolwa kwezempilo ngaphambi kokuthenga noma iyiphi injana. Futhi, buza ngempilo yomzali.
Uma kungenzeka, cela ukubona abazali nendawo lapho imidlwane igcinwa khona okungenani.
Uhlala isikhathi esingakanani u-Akitas?
Ngokuthi zikhulu kangakanani, ama-Akita anempilo enhle kakhulu. Imvamisa, u-Akita ojwayelekile uhlala phakathi kweminyaka eyi-10-15. Izakhi zofuzo, imvelo, kanye nempilo kudlala indima lapho u-Akita wakho azowela khona kulolu hlu.
Uma inja ithinteke kakhulu ngezinkinga ezahlukahlukene zezempilo, isikhathi sayo sokuphila cishe singaphansi kwenja enempilo, yezemidlalo.
Ukukhuluphala ngokweqile kungadala izinkinga eziningi zika-Akita zibe zimbi kakhulu. Isibonelo, isisindo esingeziwe singabeka ubunzima emajoyintini, okungadala izinkinga zokuhlangana.
Ngenxa yalokhu, kufanele ugcine isisindo senja yakho uma ulindele ukuthi zibe nempilo futhi ziqine kukho konke ukuphila kwazo.
Ngokusho kweThe Drake Centre for Veterinary Care, umdlavuza ubuye ube imbangela ejwayelekile lokufa kulezi zinja.
Ama-Akitas ngokuvamile abiza cishe ama- $ 800 . Umfuyi othile uthola inja ezintweni ezithile, kanjalo nohlobo lwegazi. Izinja ezifuyelwa umbukiso zizobiza kakhulu kunalezo ezifuywa njengabangane.
Abafuyi abaningi abahlonishwayo bazokhokhisa imali ethe xaxa ngezinja ezithathwa ngokuthi “ziyazala” futhi zilingana kahle nezinga lokufuya.
Ngamanye amagama, uma inja ithobela kahle inkombandlela yokuzalanisa futhi iphase izivivinyo zokuhlolwa kwezempilo, inja ingabonakala njengebaluleke kakhulu ngoba kungenzeka ikhiqize imidlwane esezingeni.
Uma ungahleleli ngokuzalanisa i-Akita yakho, khona-ke ungahle ulondoloze i-pooch yakho ngokuyilungisa ngaphambi kokuyiyisa ekhaya.
Intengo yokuphila kuka-Akita ingaba phezulu kakhulu. Isibonelo, le nja esebenzayo inkulu impela, ngakho-ke konke okuthengayo kuzofanele futhi kube kukhulu.
Bazodinga ikesi elikhulu nombhede, amathambo aqinile, kanye nemithamo emikhulu yemithi lapho kudingeka.
Badla kakhulu futhi badinga ukudla okusezingeni eliphezulu. Ngenxa yalokhu, kufanele ulindele ukuthi ukhokhe intwana yokudla unyaka nonyaka.
Kungani u-Akita evinjelwe emadolobheni athile?
Amanye amadolobha abheka lezi zinja njengengozi futhi awazivumeli ngaphakathi kwedolobha labo ngenxa yalokhu. Abanye bavumela okuhlukile, njengokuthi i-canine yakho idlula izivivinyo ezithile. Kufanele uhlole imihlahlandlela yakho yamanje yedolobha.
Kunezinhlangano eziningi kanye nabafuyi abagxile ku-Akita. I- I-Akita Club yaseMelika iyiklabhu engu- # 1 e-United States. Bahlotshaniswa ne-American Kennel Club futhi banemininingwane eminingi nge-Akita kuwebhusayithi yabo.
Ungathola futhi uhlu lwe amakilabhu ezifunda futhi basebenzise i-Akita yabo ukusesha umdlwane ukuthola imidlwane etholakalayo njengamanje.
I- IJapan Akita Club yaseMelika igxile kuma-Akitas aseJapan. Futhi bane- uhlu lwabafuyi ukuze udlulisele kulokho okungamalungu enhlangano. Le yindlela elula yokuqinisekisa ukuthi uthola umdlwane wekhwalithi.
I-United States iyikhaya lezinhlobonhlobo ze-Akita Rescues. Iningi lalezi zesifunda, noma kunjalo.
Ukubheja kwakho okuhle ukuthola eyodwa ehlanganisa isifunda sakho, njengoba izinja ezizisindisayo zizoba sendaweni yakho. Lokhu kusho ukuthi kungadingeka uhambe ibanga elifushane ukubamukela.
Okunye ukutakula kungavumela izinja zabo ukuthi ziyiswe kwezinye izindawo. Kodwa-ke, lokhu kuvame ukuthi kusho ukuthi kuzodingeka ukhokhele izinto zokuhamba noma ushayele imoto ukuze uzithathele yona.
Ezinye zezinhlangano ezidume kakhulu zifaka:
Ukutakulwa kwe-Big East Akita
Ukutakulwa kweRakki-Inu Akita .
I-Japanese Shiba Inu ehlathini
I-Akita neShiba Inu izinja ezifanayo. Bobabili bangabaseJapan futhi bayizinja ezinjengo-spitz, okubenza babukeke befana. Kodwa-ke, ziyehluka ngezindlela ezimbalwa ezihlukile.
Umehluko osobala kakhulu ukuthi iShiba Inu incane kakhulu kune-Akita. UShiba Inus umi kuphela cishe ku-13 kuye ku-17 ehlombe, kuyilapho ama-Akitas emi ngaphezu kwama-intshi angama-24. Lokhu ngumehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili.
UShiba Inus futhi unesikhathi sokuphila esiphakeme kune-Akita. Bangaphila iminyaka eyi-16 ezimweni eziningi.
Kunezingxube ezimbalwa ze-Akita ezisebenza kulezi zinsuku. Ngokobuchwepheshe, i-Akita ingazalwa nganoma iyiphi inja.
Kodwa-ke, ezinye izinhlobo ezixubekile zivame kakhulu kunezinye. IHuskita, i-Akita Shepherd, ne-Akita Chow yizona ezivame kakhulu laphaya.
Ezinye zalezi zinhlobo ezixubekile seziyizinhlobo ze- “designer dog”. Ngamanye amagama, lezi zinhlobo ezixubekile zikhiqizwa ngenhloso ukuhlangabezana nenqubo ethile.
Lokhu akuyona into entsha ngoba zonke izinja ezihlanzekile zazikhona kanye izinhlobo ezihlanganisiwe. Noma kunjalo, kungaba yimpikiswano ngandlela thile.
Noma kunjalo, kunzima ukuthola umfuyi ogxile kulezi zinja ngokukhethekile. Ngenxa yalokhu, bavame ukuba nzima ukuthola kune-Akita ehlanzekile.
Ama-Akitas angcono kakhulu emindenini yesilwane esisodwa enezingane ezindala. Lezi zinja zinamandla anesizotha futhi zidinga ukuzivocavoca umzimba usuku ngalunye. Ngenxa yalokhu, zilungele kangcono labo okungenani abasebenzayo.
Kufanele uhlele ukudlala nenja yakho ngaphandle noma uhambe nabo usuku ngalunye okungenani imizuzu engama-30. Imidlwane izodinga ukuvivinya umzimba ngokwengeziwe.
Lezi zinja futhi kungaba nzima ukuziqeqesha. Zilungele abanikazi bezinja abanolwazi abangazibophezela emakilasini okuqeqesha imidlwane nasenhlalisweni ejwayelekile. Akuzona izinja ezilula nganoma iyiphi indlela.
Kodwa-ke, lezi zinja zingathandeka ngokunakekelwa okulungile kanye nomunye wabangane abathembekile kakhulu ozothola. Bathandana kakhulu namalungu emindeni yabo futhi bangaba yizinja eziqaphile uma kudingeka.
I-Akita ingaba yinja yomndeni enhle ezimweni ezithile. Kodwa-ke, zidinga ukunakekelwa okukhethekile nokuphathwa.
I-Breed Info 101: Iluhlobo luni lwenja iChipoo?
I-husky retriever yegolide ixuba umdlwane
Impisi yomalusi we-husky wolf german
chocolate lab imidlwane amagama owesilisa
ujack russell chihuahua rat terrier mix
i-blue heeler yellow lab mix